Vokatry ny fifaninanana ho an'ny asan-gazety 2016: Ohatrinona ny tetibolan'ny kaominina misy ahy? Hotely IBIS Antananarivo - Transparency International - Initiative Madagascar
Vokatry ny fifaninanana ho an'ny asan-gazety 2016: Ohatrinona ny tetibolan'ny kaominina misy ahy? Hotely IBIS Antananarivo
Nivoaka ny 27 Oktobra 2016 ao amin'ny Hetsika, An-gazety,
Vokatry ny fifaninanana ho an’ny asan-gazety « Ohatrinona ny tetibolan’ny kaominina misy ahy ? » Hôtel Ibis Antananarivo
Ny 26 oktobra 2016 no nanatontosana ny Lanonanana fanomezana ireo loka tamin’ny fifaninanana ho an’ny asan-gazety 2016 sy ny fisantarana ny tetikasa “Ohatrinona ny tetibolan’ny kaominina misy ahy?” tao amin’ny hotely IBIS Ankorondrano, Antananarivo.
Ny lanonanana dia natrehan’ireo solotenan’ny Masoivoho frantsay, mpanohana ara-bola ny tetikasa amin’ny alalan’ny Fonds des Projets Innovants des Sociétés Civiles et Coalitions d'Acteurs (PISCCA), sy ireo mpiaramiasa amin’ny tetikasa MSIS TATAO sy ny Collectif pour les Citoyens et Organisations Citoyennes (CCOC) ary koa ireo mpikambana eo anivon’ny Transparency International-Initiative Madagascar, ireo solotenan’ny Ministeran’ny vola sy ny fitantanam-bola, ny BIANCO ary ny Fonds de Développement Local.
Tao anatin’ny lahateniny dia nanambara Andriamatoa Solofo Rakotoseheno, mpitam-bolan’ny Transparency International-Initiative Madagascar fa “ny tanjon’ity tetikasa ity dia ny hampitoetra ny fahatokisan’ny olom-pirenena ireo olom-boafidy eny ifotony sy ny mba hametrahana fitantanana mangarahara sy mifameno hahafahana manatsara ny toe-pianan’ny olom-pirenena.”
Andriamatoa Andzej Rogulski, mpanolotsaina amin’ny fiarahamiasa sy ny asa koltoraly eo anivon’ny masoivoho frantsay eto Madagasikara kosa dia nanamafy ny “ toetsaina fanjakana tsara tantana demokratika” ho tena andry hiankinan’ny tetikasa satria hahafahana mampiroborobo ireo fepetra takian’ny fifanakalozana mafonja sy ny fifanantonana eo amin’ireo fikambanan’ny fiaraha-monim-pirenena sy ireo vondrom-bahoaka ifotony”.
Ramatoa Hariniaina Rakotobe, tompon’andraikitry ny serasera eo anivon’ny MSIS TATAO sady filohan’ireo mpitsara tamin’ny fifaninanana dia nampiseho ireo vokatry ny fitsaràna. Amin’ity edisiona voalohany ity dia nidera ny isan’ireo fandraisan’anjara: 17 ireo mpandray anjara izay mizarazara amin’ireo karazana haino aman-jery toy izao:
Mpampita vaovao an-tsoratra : lahatsoratra 6
Onjam-peo: horonam-peo fanadihadiana 7
Fahitalavitra: horonantsary fanadihadiana 4.
Ny tanjon’ny fifaninanana dia ny hanome lanja ireo asa fanadihadian’ireo mpanao gazety avy amin’ireo haino aman-jery 3 eto Madagasikara: onjam-peo, fahitalavitra ary ny fanaovan-gazety antsoratra.
Ny nojeren’ireo mpitsara tao anatin’ireo lahatsoratra sy fanadihadiana dia ny fanehoana ireo asa fikarohana sy fanadihadiana mba hanazavana ny fampiasana sy ny tsy fampiasana ny volam-bahoaka eo anivon’ny kaominina eto Madagasikara.
Ny mpitsara dia nidera ihany koa ny fandraisan’anjara mafonjan’ireo vehivavy izay niisa 11 tamin’ireo 17 (izany hoe 65%) ary koa ny fahavitriha’nireo mpanao gazet tanora, ireo latsaky ny 30 taona izay niisa 7 (izany hoe 41%). Loka 5 no nozarain’ireo mpitsara.
Ireo mpandresy nandritry ny fifaninana ho an’ny asan-gazety 2016 “Ohatrinona ny tetibolan’ny kaominina misy ahy?”
Mpampita vaovao an-tsoratra : loka miisa iray
Mme RAHARIJAONA Fabiola (Farah) avy amin’ny gazet Hebdo (vondrona Express de Madagascar) tamin’ny lahatsoratra : ‘Manjakandriana: Lalaovin’ny kaominina ny fangaraharana”
Onjam-peo : loka miisa 3
Andriamatoa RAKOTONDRABE Fidinirina Ricky avy amin’ny radio Oasis tamin’ny horonam-peo fanadihadiany: “Ny tetibolan’ny kaominin’I Soavina Atsimondrano)
Rohy mankany amin’ny horonam-peo amin’ny fiteny Malagasy
Andriamatoa NAMEARISON Robert avy amin’ny radio Antsivabe Morondava tamin’ny horonam-peo fanadihadiany : « Fandaharana Voraho : tetibolan’ny kaominina »
Ramatoa RAKOTOVAO Judith Rachèle avy amin’ny RTA Mahajanga tamin’ny horonam-peo fanadihadiany: “Ny fitantanana ireo vola miditra avy amin’ireo tsena ao amin’ny kaominina ambonivohitra Mahajanga”.
Fahitalavitra : loka iray
Andriamatoa Christian Norbert ANDRIAMIHERY avy amin’ny VIVA Mahajanga tamin’ny horonantsary fanadihadiany « Fampidirambolan’ny kaominina Mahajanga-haban-tsena amin’ny alalan’ny perception mobile ».
Rohy mankany amin’ny horonan-tsary amin’ny fiteny Malagasy ( hipetraka eto atsy ho atsy)
Ireo nandresy dia samy nahazo amboara narahina loka avy amin’i Transparency International-Initiative Madagascar sy ireo mpanohana ny fifaninanana FedEx sy Samsung.
Ny loka manokan’ny mpitsara hoana vondrona haino aman-jery iray dia tsy nomena tamin’ity taona ity. Ny tanjon’ity loka ity dia ny hankasitrahana ny asa miavaka ataon’ny vondrona haino aman-jery iray amin’ny asa fanadihadiana ataon’ireo mpanao gazety ao aminy sy ny fampahafantarana ireo olom-pirenena mahakasika ny fampiasana ireo volam-bahoaka eo anivon’ny kaominina. Nisafidy ny hanemotra ity loka ity ho amin’ny taona manaraka ireo mpitsara mba hanomezana fotoana ireo mpanao gazety hahafantatra misimisy kokoa mahakasika ny fifaninanana.
Ireo mpikambana tao amin’ny fitsaràna ny fifaninanana ho an’ny asan-gazety “Ohatrinona ny tetibolan’ny kaominina misy ahy?”
Mme Lily RAZAFIMBELO, Mpikambana mpamorona ny Collectif des Citoyens et des Organisations Citoyennes (CCOC)
Mme Hariniaina RAKOTOBE, tompon’andraikitry ny serasera eo anivon’ny MSIS TATAO
M. Tanjona HARIJAONA DEVAUX, mpitam-bola ankapobeny eo anivon’ny Ivon-gazety Malagasy, mpampianatra sy mpanao gazety ao amin’ny Midi Madagasikara
Mme Gaëlle BORGIA, Mpanao gazety mpanadihady an-tsary , iraky ny AFP sy France 24 eto Madagasikara
Mme Prisca RANANJARISON, tompon’andraikitry ny serasera sy mpanao gazety arakoltoraly eto anivon’ny RLI
M. Stéphane GALLET, tompon’andraiktry ny fiaraha-miasa eo anivon’ny masoivoho frantsay
M. Jean-Jacques HELLUIN, mpanolotsain’ny masoivoho frantsay eo anivon’ny Ministeran’ny fitsinjaram-pahefana sy praiministra